विभिन्न वर्ण को उल्लेखनीय सैनिकहरू मनाउन गर्न परम्परा लामो समय पहिले उत्पत्ति। पुरातन समयमा समेत मानिसहरू Laurel माला, भाले र अन्य वस्तुहरु सम्मानित थिए युद्धमा आफूलाई प्रतिष्ठित छ, उसलाई अरूलाई बीचमा खडा र आफ्नो merits देखाउन अनुमति दिन्छ। विभिन्न देशहरूमा राज्य को विकास स्थानीय विशेषताहरु र परम्परा प्रतिबिम्बित गर्न सैनिक प्रोत्साहन आफ्नै सिस्टम गठन गर्न थाले।
विभागीय संकेत को उद्भव
1944 मा सोभियत संघ को Presidium उर्दी द्वारा लामो सेवा को लागि अन्तरिक्ष यान को सैन्य पदक र आदेश awarding को प्रक्रिया शुरू। तिनीहरूले सेवा लम्बाइ आधारमा दिइएको थियो। पदक "युद्ध मा सेवा को लागि" प्राप्त 10 वर्ष को अनुभव थियो जो व्यक्ति, आदेश "रातो तारा", "रातो ब्यानर", "लेनिन" - 15, 20 र 25, क्रमशः। कवर र पुन: पुरस्कृत गरियो। जब कुनै दोष नभएको 30 वर्ष सैनिक सेवा "रातो ब्यानर" को अर्को आदेश प्राप्त गर्न सकेन। वर्ण को यो "विशाल" वितरण गर्ने प्रतिष्ठा आफ्नो गिरावटको नेतृत्व गरेको छ। यस सन्दर्भमा, 1957 मा, पुरस्कार सिस्टम जेठोपन हटाइएको थियो। बरु, 1958 को उर्दी अन्तर्गत सबै कानुन प्रवर्तन निकायहरूबाट आफ्नै स्थापित गरेको छ पदक "faultless सेवाको लागि"। सबै पुरस्कार आंतरिक, रक्षा को मन्त्री र KGB को अध्यक्ष को आदेश मा गरेका थिए।
1991 मा, सोभियत संघ एक राज्य अवस्थित भएनन् छ। क्रमशः यो निर्मूल गरिएको छ, र साथ 1958 पुरस्कार सिस्टम कार्य। 1992 मा RSFSR सर्वोच्च सोभियत को Presidium उर्दी अनुसार, केही पदक र पूर्व सोभियत संघ को आदेश प्रयोग गर्न अनुमति थिए। यस मामला मा, आधारभूत आवश्यकता सोभियत प्रतीक को उन्मूलन थियो।
एक सार्वभौम राज्य रूसी संघ को आधिकारिक घोषणा पछि यो आफ्नै पुरस्कार सिस्टम गठन गर्न आवश्यक भएको छ। तदनुसार, 1994 मा, राष्ट्रपति उर्दी नम्बर 442. Para अनुसार द्वारा अपनाए थियो। 25 यो कागजात को, संघीय कार्यकारी संरचना कर्मचारीहरु, जो समानता छैन गर्नुपर्छ ब्याज, पदक, ब्याज सहित को लागि पुरस्कार को विभिन्न प्रकार सेट आफ्नो निर्णय गर्ने अधिकार छ राज्य पुरस्कार संग। पनि समावेश शीर्षक र कर्मचारी को परिभाषा को शक्तिहरु मा। पदोन्नति को स्थापना प्रकार राज्य पुरस्कार र राज्य Gerold देश को हेड मा मा आयोग संग समन्वय बाहिर गर्नुपर्छ। सार्वजनिक र धेरै भेटेरान 'संगठन, casually भन्यो अनुच्छेद को पछिल्लो tunings पढ्ने, सहभागीको लागि विभिन्न पदक स्थापित गर्न थाले।
स्थिति पदक "सैन्य सहयोग सुदृढ लागि"
यो पुरस्कार विभागीय छ। यो मार्च 27 को आदेश № 123, 1995 रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित भएको थियो। केही वर्षपछि, 2009 मा, यो कागजात शून्य छ। यसलाई सट्टा नयाँ नम्बर 85. आदेश स्वीकृत त्यहाँ पदक सोभियत अवधिमा "सैन्य सहयोग सुदृढ लागि" थियो भने गर्नुपर्छ। спустя несколько лет после ВОВ находился в своего рода политической изоляции. सोभियत संघ दोस्रो विश्व युद्ध पछि केही वर्ष राजनीतिक अलग्गै एक प्रकारको थियो। यो जडान मा, पुरस्कार शायद कसलाई दिइएको थियो। " имели граждане стран, участвовавших в Варшавском договоре и военных учениях объединения. साधारणतया यो पदक "सैन्य सहयोग सुदृढ लागि" वरस सम्भ्कौता सैन्य अभ्यास र संगतले भाग देशहरूको नागरिकहरु थिए। यसको शुरूआत देखि कुनै पनि समयमा, र संघ पतन सम्म, यो 20 को क्रम हजार। मानिसको सम्मानित गरिएको थियो। " советского образца одной из самых редких из всех, которые были введены в послевоенные годы. विभिन्न distinctions सङ्कलन को रुचाउनु भएका मान्छे, सोभियत-शैली युद्धपछिको वर्ष शुरू थिए जो सबै को rarest, एक "सैन्य सहयोग सुदृढ लागि" पदक विचार गर्नुहोस्। साइन संस्थाले 1979 मा भयो। पुरस्कार सूर्य को Presidium तर्फबाट, आंतरिक मंत्रालय, रक्षा मन्त्रालय, वा KGB को अध्यक्ष दिइएको थियो। служащий должен был зарекомендовать себя в сфере упрочения военного сотрудничества между странами соцлагеря. "सैन्य सहयोग सुदृढ लागि" m पेडल प्राप्त गर्न, एक कर्मचारी को समाजवादी शिविरमा को देशहरूमा बीच सैन्य सहयोग को बलियो को क्षेत्र मा नै साबित भएको थियो।
हाल विधान तहमा यो भिन्नता साइन प्राप्त लागि अवस्था परिभाषित। могут получить военнослужащие и гражданские лица, состоящие в рядах ВС России. पदक रूसी संघ को रक्षा मन्त्रालय रूसी सशस्त्र बलहरु मा सेवा सेना र नागरिकहरु प्राप्त गर्न सक्छन् "सैन्य सहयोग सुदृढ लागि"। केही अवस्थामा, इनाम रक्षा को क्षेत्रमा हाम्रो देश संग सहयोग को बलियो बनाउँछ ठूलो योगदान गरेका छन् जो विदेशीहरू सहित अन्य मान्छे, गर्न सम्मानित हुन सक्छ। вручается гражданам, которые содействовали решению проблем, отнесенных к ведению ВС. साथै, पदक "सैन्य सहयोग सुदृढ लागि" सशस्त्र बलहरु को व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न योगदान जो रक्षा नागरिक, गर्न सम्मानित गरिएको छ।
सुविधाहरू awarding र लगाएका
" вручается по приказу Минобороны в порядке, установленном локальным актом министерства. पदक "सैन्य सहयोग सुदृढ लागि" रक्षा मन्त्रालय आदेश द्वारा कार्य स्थानीय मन्त्रालय द्वारा स्थापित क्रममा सम्मानित गरिएको छ। इनामदायी एक Solemn समारोह मा लगे छ। विशिष्ट नागरिक मंत्री वा अन्य व्यक्ति उहाँबाट अधिकृत एउटा साइन प्राप्त गर्दछ। ". प्रमाणपत्र र एक पदक "सैन्य सहयोग सुदृढ लागि" को रूपमा पुरस्कृत गरियो। 1995 मा नमूना को पुरस्कार बाँया अंगरखा मा पहना छ। यो एक विभागीय पदक "प्रख्यात सेवा को लागि" को एक अगाडि छ। उत्तरार्द्ध एक "वरिष्ठ" मानिन्छ। पछि निपटान लागि (2009 देखि), कुनै विशेष नियमहरू स्थापित गरिएको छैन। यो कि "सैन्य सहयोग सुदृढ लागि" एक पदक संग मान्छे, यो लाभ प्राप्त छैन भने। यो धेरै अन्य distinctions गर्न विपरीत छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार, यो एकदम उचित छ। तथ्यलाई नागरिकहरु तर पनि विदेशीहरू मात्र होइन एक पदक प्राप्त छ "सैन्य सहयोग सुदृढ।" или какие-либо иные материальные меры были бы в этом случае неуместны. भुक्तानी वा अन्य कुनै पनि ठोस उपाय यो मामला मा अप्रासंगिक हुनेछ।
यो पदक एक धातु मिश्र धातु बनेको र सुनको रंग छ छ। यो एक राउन्ड आकार छ। यस पुरस्कार को व्यास -। किनारा साथ 3.2 सेमी एक convex रिम को अगाडि र पछाडि पक्षले वर्तमान छ। को अग्र ढाल दुई तरवार diagonally पार। यो पनि केहि convex छ। चार लाइनहरु मा ढाल को केन्द्र मा सिक्का को नाम हो। ओक शाखा तल्लो अर्धवृत मा स्थित। केन्द्र को उल्टो मा प्रतीक रूसी सशस्त्र बलहरु छ। वर्तमान लेखिएको तल्लो र माथिल्लो भागमा। तिनीहरूले राजधानी पत्र मा छन् र एक अर्धवृत मा प्रबन्ध छन्। "रूसी संघ" - शीर्ष "रक्षा मन्त्रालय", र तल पढ्छन्। कान को शीर्ष र एक सानो घन्टी प्रदान गर्दछ। यी तत्व मौआ रेशम रिबन संग कवर pentagonal ब्लक गर्न पुरस्कार सुरक्षित गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसको आकार -। रातो, चौडाइ 0.4 सेमी, हरियो र नीलो दुई-मिलिमिटर tench को किनाराको मा edged - सही टेप मा 2.4 सेमी चौडाई 1 सेमी, कालो edging मिमी संग, बायाँ wherein सुन्तला दल, विस्तार।
सबैभन्दा पुरातन समयका साथ तरवार संग ढाल, यो fatherland रक्षा गर्न आफ्नो तत्परता व्यक्त। ओक शाखा सैन्य महिमा नामित। को पुरस्कार स्वामित्वको सुन्तला पट्टी शो प्रणाली को सैन्य भिन्नता प्राप्त; रातो, नीलो, हरियो रेखा पुरस्कार सैन्य सहयोग बलियो एउटा विशेष योगदान गरेका छन् जसले नागरिक, वितरण लागि निमित्त भनेर संकेत गर्छ।
एक पदक कसरी प्राप्त गर्ने?
पुरस्कार superiors को अनुरोध मा प्रस्तुत गरिएको छ। उदाहरणका लागि, अनुप्रयोग battalion कमान्डर, विभाजन वा रेजिमेन्ट पेस गर्न सक्नुहुन्छ। को आवेदन अनुसार, विजेता को सूची गठन गर्दै हुनुहुन्छ। सूची, बारी मा, उच्च डिभिजनका पठाइएका छन्। सूची पुरस्कार को लागि मनोनीत व्यक्ति को सबै उपलब्धिहरू संकेत गर्छ। रक्षा मंत्रालय मा छलफल कागजातहरू को तयारी। सूचीहरू infringements हो भने, तिनीहरूले संशोधन लागि फिर्ता पठाइयो। Awarding एक पटक ठाउँ लिन्छ। सिक्का को Reacquisition प्रदान गरिएको छैन।
यस पुरस्कार को इतिहास
पहिलो पटक पदक सम्म उहाँले 9.5 भन्दा बढी हजार थियो। मान्छे सम्मानित गरियो 2000 1996. मा 82 मान्छे पायो। को पदक प्राप्त गरेका सबै भन्दा प्रसिद्ध व्यक्तित्व बीच, यो उल्लेख गर्नुपर्छ:
गायक Nikolay Noskov। उहाँले साथै अभियान "रक विरुद्ध औषध" मा, Chechnya सेवा गर्ने रूसी सैनिकहरू लागि आयोजित दान घटनाहरू मा सक्रिय भाग लिए। मोजा धेरै पटक वर्षको गायक बुझे। 1999 मा उहाँले पनि "को काकेशस मा सेवा को लागि।" को पदक प्राप्त
गायक अलेक्जेन्डर Buynova। यसबाहेक पदक छलफल, उहाँले "हट स्पट" आफ्नो कामको लागि सम्मानित "रूस को स्वाट", "आंतरिक मंत्रालय को पदोन्नति लागि", आदि Buinov अन्य पुरस्कार छ।। गायक पनि धेरै धन्यवाद र प्रमाणपत्र, आंतरिक मंत्रालय, रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रपति सहित दावा र।
लेखक Nikolai Pereyaslova। उहाँले राइटर्स को Plenary सभा, Chechnya 2000 मा आयोजित मा सहभागी लागि पदक सम्मानित गरिएको थियो। साथै, Pereyaslov को RPU थुप्रै अन्य वर्ण, तिनीहरूलाई बीचमा छ।
कजान Zyyatdinova K. Sh। पदक मा चिकित्सा अकादमी को Rector स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो योगदान लागि उहाँलाई द्वारा प्राप्त भएको थियो। उनको बाहेक, उहाँले "सीमा रक्षक मा उत्कृष्टता" र धेरै अन्य सम्मानित गरिएको थियो।
Tatarstan अभियोजक Kafil Amirov। उहाँले पदक 2010 मा भएको थियो पहिलो गणतन्त्र आर Muratov को उपाध्यक्ष-राष्ट्रपति सम्मानित गरिएको थियो। Tatarstan धेरै वर्ष को लागि सशस्त्र बलहरु रैंकों सेवा गर्न मान्छे प्रशिक्षण मामलामा भएको एक अग्रणी स्थिति।
एडमिरल एम ए Peyrot। मेक्सिको को नौसेना को मन्त्री रूस संग द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को विकास गर्न आफ्नो विशेष योगदान लागि 2006 मा सम्मानित गरिएको थियो।
फर्नान्डो र Miguel Polonio। पदक 2006 मा इटालियन भाइहरूलाई सम्मानित गरियो
विजेताहरु बीच, बीच, मान्छे तर पनि जनावर मात्र छैन। तसर्थ, पदक Altai सेवा, जास्मिन गोठाला छ।
रक्षा मन्त्रालय अन्य पुरस्कार स्थापित छ। यी विशेष मा, पदक समावेश समावेश "सैन्य भिन्नता लागि।" मार्च 2003 को अन्त्यमा आदेश, जो यो स्थापित भएको थियो अनुसार हस्ताक्षर भएको थियो। पदक को लडाई मा वा विशेष अपरेसन समयमा साहस र समर्पण देखाएका छन् जो कर्मचारीहरु लाई प्रदान गरिएको छ छ। को "मा सैन्य सेवा भिन्नता लागि" यो पहिलो 1995 मा स्थापित भएको थियो। 2009 मा उहाँले आफ्नो परिचय को नयाँ अर्डर द्वारा हस्ताक्षर भएको थियो। पदक सेवामा परिश्रम देखाएका छन् जो व्यक्तिहरूलाई गर्न पुरस्कृत गरियो। तीन डिग्री यो साइन लागि प्रदान। उच्च पहिलो मानिन्छ।
एक सार्वजनिक कार्यालय - यो के हो? परिभाषा
हिउँदमा च्याउ spawn: एक स्वादिष्ट खाजा लागि एक नुस्खा
कसरी ई-मेल द्वारा एक पोस्टकार्ड पठाउन विवरणहरू
छैन पक्का युवा को महल भ्रमण गर्न चाहे? मिन्स्क तपाईं साबित यसलाई लायक छ कि!
बाइक ट्युनिङ बारेमा
आधुनिक Orsk मा "स्वास्थ्य पार्क": सेवा र समूह कक्षाहरू
माछा Anabas: वर्णन, सुविधा र व्यक्ति को लागि लाभ
बसाई सराई: मदत प्रजाति सही छनौट गर्न
जो नयाँ एप्पल हुनेछ? आफ्नो रणनीति प्रयोग गरेर